K-Tek dia manana fitaovana mandroso hanome anao serivisy fanodinana cnc isan-karazany, ao anatin'izany ny fikosoham-bary, ny fihodinana, ny EDM, ny fanapahana tariby, ny fikosoham-bary ary maro hafa. Mampiasa ivon-toeram-pamokarana CNC 3, 4 ary 5-axis ampiasainay izahay mba hanomezana anao vahaolana tsara, fahaiza-mahatalanjona ary famoahana mendrika ho an'ny tetikasa milina rehetra. Tsy manana milina isan-karazany ihany izahay, fa ekipa manam-pahaizana ihany koa, izay manolo-tena hanome anao serivisy tsara indrindra any Shina. Ireo mekanika mahay ananantsika dia afaka mampiasa plastika sy vy isan-karazany hamokarana faritra mihodina sy manodina.
Manome toky anao izahay fa na manao ahoana na manao ahoana haben'ny asa, ny matihaninay dia mandray azy ireo toa azy. Afaka manome serivisy fanodinana milina CNC prototype izay hanampy anao amin'ny fahazoana sary mazava momba ny vokatra farany koa izahay.
K-Tek dia manampahaizana manokana amin'ny fanodinana ampahany amin'ny milina. Ny serivisy manokana Integrated Services dia nanaja ny fahaizany sy ny fizotrany. Ny injenieranay dia hiara-hiasa aminao mba hiantohana ny kalitaon'ny endrika ambony indrindra ho an'ny famokarana sy ny fivoriambe. Ny serivisy sy ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa tena tsara dia marika mampiavaka ny orinasanay ary fototry ny fahombiazan'ny orinasanay.
ara-potoana -Fantatsika fa ny ampahany sasany amin'ny asantsika dia manana fe-potoana maika, ary manana ny fahaiza-manao sy ny mekanisma hiantohana izahay fa manome fotoana ara-potoana nefa tsy manimba ny kalitaon'ny asa ataontsika.
za-draharaha -10 taona mahery izahay no nanolotra serivisy fanodinana CNC. Nanangona milina fanodinana mandroso isan-karazany izahay ho an'ny dingana maro samihafa ary manana ekipa injeniera sy mpandraharaha efa za-draharaha hanome vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifantsika rehetra.
Fahaiza-manao - Miaraka amin'ny fahasamihafana eo amin'ny masininay, afaka manome antoka ny fahamarinan'ny entana rehetra amin'ny habe rehetra izahay.
Manamboatra volavola ambany - Ny famokarana amin'ny habetsany ambany dia vahaolana mety indrindra amin'ny fitantanana ny tahirinao sy ny fanandramana ny tsena alohan'ny hamokarana betsaka kokoa. Ny fisafidianana ny orinasa mpamokatra volavola ambany no safidinao tsara indrindra.
Fametahana mazava tsara sy ireo rafitra CNC mahomby
Miaraka amin'ny famatsiana coolant spindle, afaka manapaka fitaovana haingana kokoa noho ny rafitra spray spray mahazatra isika, ary ny CAD / CAM, UG ary Pro / e, 3D Max. afaka mifanerasera am-pahombiazana kokoa amin'ny mpanjifa ara-teknika ary manafaingana ny fizotrany rehetra ary manome anao vokatra mahomby be. Ireo ivon-toeram-pamolavolana CNC marindrano roa dia misy knuckles familiana mandeha ho azy ahafahantsika milina amin'ny zoro rehetra. Miaraka amin'ny fampiasana fitaovana boribory, io dia ahafahantsika mahatratra ny géérique sarotra mitovy amin'ny masinina axis dimy.
Mampiavaka ny fihodinan'ny CNC
1.CNC lathe famolavolana CAD, modularization famolavolana rafitra
2. Haingam-pandeha, avo lenta ary azo itokisana
3. Na dia boribory matetika aza ny fitaovana fanombohana, dia mety endrika hafa, toy ny efamira na hexagon. Ny tsipika sy ny habeny tsirairay dia mety mitaky "clip" manokana (subtype an'ny collet - mamorona vozon'akanjo manodidina ilay zavatra).
4. Ny halavan'ny bara dia mety miovaova arakaraka ny mpamatsy bara.
5. Fitaovana ho an'ny lathes CNC na ivon-toeram-piolanana dia napetraka eo amin'ny turret amin'ny alàlan'ny solosaina.
6. Sorohy ny endrika sarotra toa ny firafitra manify lava
Fitaovana iarahantsika miasa
Ireo fitaovana isan-karazany iarahantsika miasa dia misy, fa tsy ferana amin'ny:
Inôksa titane Delrin pijery
varahina Inconel Polypropylene Lexan
Aluminum Hastelloy UHMW Acrylic
Copper Super Duplex PVC Phenolics
Vy mangatsiaka mihodina Bronze Acetal Teflon
Firaka nikela Monels PVC PTFE
Carbon Fiber Steel rehetra firaka nylon POM
Fitsaboana ambonin'ny mekanika Fanapoahana fasika, fitifirana fitifirana, fikosoham-bary, fanodinkodinana, fikolokoloana, fanosorana, famafazana, hosodoko, hosodoko solika sns.
Fitsaboana ambonin'ny simika Bluing sy Blackening, Phosphating, pickling, plastika tsy misy herinaratra amin'ny metaly sy alloys isan-karazany sns.
Fitsaboana amin'ny alàlan'ny electrochemical Oxydation Anodika, Polishing electrochemical, Elektroplating sns.
Fitsaboana maoderina CVD, PVD, fametahana Ion, Fametahana Ion, Fitsaboana amin'ny endrin'ny laser sns.
Fipoahana fasika Fasika fanamainana fasika, famaohana fasika mando, fasika fanapoahana fasika sns.
fanafody Famafazana electrostatic, Famafazana laza, Famafazana vovoka, Famafazana plastika, Famafazana plasma
Electroplating Fametahana varahina, firafitra Chromium, firaka zinc, firafitra nikela